Isbuurashada Israa’iil Kullan Diini ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan 44 qof | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Isbuurashada Israa’iil Kullan Diini ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan...
Isbuurashada Israa’iil Kullan Diini ah oo ay ku dhinteen ugu yaraan 44 qof
Adeegga gurmadka degdegga ah ee Israa’iil ee Magen David Adom (MDA) ayaa xaqiijiyay dhimashada inkastoo aanay sheegin tirada saxda ah ee dadka geeriyooday, haseyeeshee mas’uuliyiinta gurmadka degdeg ah ayaa sidoo kale sheegay in tobanaan qof ee kale kale ay ku dhaawacmeen dhacdadaan.
Raysal wasaare Benjamin Netanyahu ayaa dhacdada ku tilmaamay “musiibo culus”, wuxuuna sheegay “in uu u duceynayo” dadka ay wax yeellada ka soo gaartay.
Munaasabadda oo la yirahdo Lag B’Omer oo ka dhacday dhul-dhaca Buurta Meron, waa bandhiggii ugu ballaarnaa ee lagu qabto Israa’iil tan iyo markii fayraska corona uu bilowday.
Waxaa lagu soo warramayaa in munaasabadda ay ka soo qeybgaleen tobanaan kun oo qof, in kasta oo walaac laga qabo fiditaanka fayraska corona ee faraha ba’an ku haya dunida.
Adeegga gurmadka degdegga ah ee Israa’iil ee Magen David Adom ayaa sheegay in aysan marnaba quusan doonin ilaa iyo inta laga soo daadgureynayo dadka ugu dambeeya.
Previous articleMuuse Biixo oo booqday dhismaha Buundo wayn oo laga dhisayo inta u dhaxaysa Hargeysa iyo Berbera.
Next articleKenya oo sheegtay inay si rasmi ah ugu gudbisay hay’adda UNHCR inay xiri doonto xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma 30-ka bisha Juun ee 2022-ka.